स्टेफेन हकिंग: हरेक नियम तोडेर अमर भएको वैज्ञानिक ! - Laltin Media
Home»मोटिभेसन»स्टेफेन हकिंग: हरेक नियम तोडेर अमर भएको वैज्ञानिक !
By लाल्टिन डट कम May 25, 2022 Updated: May 25, 2022 No Comments2 Mins Read
स्टेफेन हकिंगको नाम नसुनेको कोही बिरलै व्यक्ति होला । उनलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनपछि जन्मेको सबभन्दा महान वैज्ञानिक मानिन्छ । उनको जन्म जनवरी ८, १९४२ मा भएको हो । उनी २१ वर्षको हुँदा उनलाई ‘एमीट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस’ भन्ने एक खतरनाक रोग लाग्यो जसले गर्दा उनको शारीरिक अङ्गहरुले एक एक गर्दै काम गर्न छोडे । डक्टरले उनी जम्मा २ वर्ष बाँच्ने घोषणा गरेका थिए । तर, हकिंग यस्ता जबर्जस्त जिद्दी मान्छे थिए की उनी अर्को ५५ वर्ष बाँचे र ब्ल्याक होलजस्ता ब्रह्माण्डका अद्भुत कुराहरु अध्ययन गरी वैज्ञानिक दुनियाँमा आफ्नो प्रगाढ छाप छोड्न सफल भए ।
उनले एक किताब लेखेका छन् ‘ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम’ । यस पुस्तकमा उनले ब्रह्माण्डको सुरुवात देखि अहिले सम्मको कहानी छोटकरीमा बताएका छन् ।हकिंगले मुख्य रूपमा सामान्य सापेक्षताको क्षेत्रमा र विशेष गरी ब्ल्याक होलको बारे अध्ययन गरे।
१९७१ मा उनले बिग ब्याङ्ग पछि, एक अरब टन जति द्रव्यमान भएका तर प्रोटोनको ठाउँ मात्र ओगटेका असंख्य वस्तुहरूको गठनको सुझाव दिए। यी वस्तुहरू, जसलाई मिनी ब्ल्याक होल भनिन्छ, यति अद्वितीय छन् कि तिनीहरूको विशाल द्रव्यमान र गुरुत्वाकर्षणले तिनीहरूलाई सापेक्षताको नियमहरूद्वारा शासन गर्न आवश्यक छ । तिनीहरूको सुक्ष्म आकारले तिनीहरूमा पनि क्वान्टम मेकानिक्सको नियमहरू लागू गर्न आवश्यक छ।
सन् १९७४ मा हकिंगले क्वान्टम थ्योरीको भविष्यवाणी अनुसार ब्ल्याक होलले आफ्नो उर्जा समाप्त नहुन्जेल र अन्तमा विस्फोट नहुँदासम्म उपपरमाणविक कणहरू उत्सर्जन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। हकिंगको कामले ब्ल्याक होलका गुणहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा चित्रण गर्ने प्रयासहरूलाई धेरै प्रोत्साहन दियो, जसको बारेमा पहिले केहि पनि थाहा हुन सक्दैन भनेर सोँचिएको थियो। उनको काम पनि महत्त्वपूर्ण थियो किनभने यसले यी गुणहरूलाई शास्त्रीय थर्मोडायनामिक्स र क्वान्टम मेकानिक्सको नियमसँग सम्बन्ध देखाएको थियो।
यसरी, विश्वलाई ब्रह्माण्डको बारेमा यति धेरै आश्चर्यजनक कुराहरुको सौगात दिएर हकिंगले २०१८ मा आफ्नो भौतिक शरीर छाडेर गए । तर, उनको विज्ञानप्रतिको लगाव, कामप्रतिको एकाग्रता र हरेक नियम तोडेर शानसँग बाँच्ने जीजीविशाले यस पृथ्वीका हरेक विद्रोही स्वभावका व्यक्तिलाई सदा उत्प्रेरित गर्नेछ ।